Toy izao no nataon'i Iceland tamin'ny Taom-baovao
Islandy, ny tanin'ny afo sy ny ranomandry, miaraka amin'ny rivotra madio sy ny jiro manjelanjelatry ny avaratra , dia toerana mahafinaritra ho an'ny dia taom-baovao. Ary noho ny antony: ny renivohitr'i Islandy, Reykjavik, dia tena mahafantatra ny fomba hankalazana mandritra ireo alina lava mangina.
Ny renivohitra farany avaratra indrindra eran-tany, Reykjavik, dia mankalaza ny Taom-baovao amin'ny fomban-drazana sy ny fanoloran-tena feno fitiavana.
Ny Taom-baovao ao Reykjavik dia zava-nitranga manan-danja ho an'ireo Islisy ary ankalazaina araka izany.
Amin'ny fomba mahazatra dia manomboka ny hariva amin'ny lanonana ao amin'ny Katedralin'i Reykjavik, izay iantefan'ny Islandy maro amin'ny radio, ny lanonana. Izany dia matetika arahina amin'ny sakafo hariva.
Ny sakafo hariva amin'ny taom-baovao dia matetika ny fitsapana goavana amin'ny fianakaviana. Olona maro no manao akanjo tsara indrindra, akanjo sotro, ary manamboatra toeram-pivarotana tsara amin'ny taona ho avy.
Fomban'ny Taom-baovao hafa
Ny "Áramótaskaupið " (na ny "Komitin'ny Taombaovao") dia fandefasana televiziona amin'ny teny islandey isan-taona ary ampahany manan-danja amin'ny fankalazana ny Taombaovao Yvelana ho an'ny maro. Mifantoka amin'ny taona lasa izy io amin'ny fomba fijery mamoafady ary mampiseho hatsaram-panahy kely amin'ireo niharan'izany, indrindra ireo mpanao politika, mpanakanto, mpandraharaha malaza, ary mpikatroka.
Avy eo, isaky ny ampahefatry ny tanàna, ny mpifanolo-bodirindrina dia mihaona amin'ny fefiloha lehibe (Islandy: Brenna ) hankalaza ny taom-baovao ao Reykjavik, raha ny fijerena ireo fandroana maro maneho ny tanàna.
Ny akanjo dia tena tsy mahazatra ho an'ireo fety an-kalamanjana, noho izany dia manompa ny kiraro ho an'ny kiraro tennis. Ara-dalàna ho an'ireo mpitsoa-ponenana ihany koa ny mpitsoa-ponenana, mba hahafahanao mahita matetika mampiseho ny habe rehetra, lehibe sy kely. Ny governemanta dia manainga ny fandraràna ny afomanga ho an'ity alina iray ity, ary ny fisehoan-java-manify lehibe kokoa dia mety ho tena mampihetsi-po tokoa.
Tsy maintsy mahita azy ireo hino azy ireo ianao. Taorian'ny fiantsoana ny famantaranandro, maro tamin'ireo mponina no nisotro sombin-tsakafo bebe kokoa rehefa nipoaka ny afomanga tamin'ny misasakalina.
Taty aoriana, nivory tao amin'ny faritra afovoan-tanàna kely tao Reykjavik ny mponin'ny tany ho an'ny fety iray. Raha ny marina, malaza ny androm-piainan'i Reykjavik. Amin'ity andro farany amin'ny taona ao Reykjavik ity, misy fitsipika iray tsy manan-tsahala: Ny hafanana ny hafanana, ny hafanana amin'ny alina.
Amin'ny taom-baovao an'arivony ao Reykjavik, mozika an-jatony no manolotra matetika mozika mivelatra hatramin'ny farafahakeliny 5 ora. Fanamarihana: Sarotra ny mahita trano fisakafoanana iray izay misokatra ny Taombaovao, ka miomàna mialoha. Soa ihany, raha nanana sakafo matsiro be ianao teo aloha, dia tsy tokony ho olana izany. Satria mitombo ny fizahan-tany any Islandia dia mihamitombo hatrany ny trano fisakafoanana maromaro, fa aza miandry azy.
Aza manantena hitady hetsika ofisialy, manohana ny tanàna, fa tsy tokony ho sarotra ny hahita fety manokana.
Raha mitsidika an'i Islandy ianao amin'ny taom-baovao, dia raiso ny fandefasana fitsangatsanganana hitsidika ny toerana tsara indrindra hijerena ny afomanga. Azonao atao ihany koa ny mikaroka fitsangatsanganana afo raha tsy azonao antoka izay haleha.
Taona vaovao any Skandinavia
Te hianatra bebe kokoa? Jereo ny Taombaovao any Scandinavia mba hahafantarana momba ny firenena hafa hankalaza ny taona vaovao.
Ireo Andro tsy mety mampino any Reykjavik
Ny Travel Travel Reykjavik
Reykjavik, Islandy - Ny ankamaroan'ny renivohitra avaratr'izao tontolo izao
Torolalana Gay momba an'i Milwaukee, Wisconsin
Ahoana no hialana amin'ny Malaga ka hatrany Cordoba
Anarana amin'ny teny frantsay: Tabernacle
Lalao Bingham 2016 - Championship Gay Rugby 2016
Ny fomba fitsidihana ny valan-java-bozaka Denali tsy misy mandeha amin'ny lalana
Fomba ahoana no hisorohana ny fitsangatsanganana amin'ny fitsidihana?
Ny nandaniako: alina telo tany Nouvelle-Orléans
Sarin'ny Scottish Christmas Walk Photos
Dolly Steamboat Cruises Lake Canyon
10 Tetikasa maimaim-poana any Bangkok
Ny Omni Homestead ao Hot Springs, Va
Mandray ny Casinos Las Vegas amin'ny teti-bola
Ny Torolàlana ho an'ny Fandriam-pahalemem-pitiavana ho an'ny Walt Disney World
Toeram-piompiana sinoa any Caroline Avaratra